Archive du 20170428
Marc Ravalomanana Lotoina vao mainka mamiratra
Maro amin�ireo mpifanandrina ara-politika no miezaka mandoto sy manaratsy an�i Marc Ravalomanana satria tsy mbola nisy nahavita ny vitany aloha hatreto raha samy mpitondra teto Madagasikara.
Raharaha Razaimamonjy sy Ratiarison Fandebirebena saim-bahoaka fotsiny
Ny sabotsy 22 aprily teo no voalaza fa tonga teto an-tanindrazana tamin�ny 10 ora alina i Claudine Razaimamonjy rehefa avy nanaraka fitsaboana maika tatsy Maorisy.
Dinika politika tany Antsiranana Vita ny Sonia, andrasana ny famatsiam-bola
Vita sonia tany Antsiranana omaly 27 aprily ny fifanarahana mahakasika famatsiam-bola miisa 4 avy amin'ny Vondrona Eoropeanina, taorian�ny dinika politika niarahan�izy ireo tamin�ny governemanta Malagasy.
Guy Rivo Randrianarisoa � Manam-petra ny faharetan�ny vahoaka Malagasy �
Nambaran�ny mpitondra tenin�ny antoko � Tiako i Madagasikara �, ny Kestora Guy Rivo Randrianarisoa, fa efa tena vizana amin�ny fiandrasana lava ny vahaolana entin�izao fitondrana ankehitriny izao amin�ny hanatsarana ny tontolom-piainan�izy ireo, ny vahoaka Malagasy izay efa vizaky ny sondro-bidim-piainana tsy mitsahatra miakatra nefa dia toa mijanona ho antso an�efitra ny fitarainan�izy ireo hatramin�izao.
Orana artifisialy narahina havandra Namotika zavatra maro
Nanomboka ny 25 aprily ka hatramin�ny anio 28 aprily no andatsahana orana voatr�olombelona raha ny fanambaran�ny sampandraharaha mpamantatra ny toetr�andro
FOKONTANY ANDOHATAPENAKA III Trano 53 tafo no horavana
Raikitra indray ny ady tany ao amin�ny fokontany Andohatapenaka III. Trano 53 tafo no tsy maintsy horavana ao anatin�ny fotoana fohy, raha araka ny fantatra.
Ranon�orana mikija Potika ny 80%-n�ny fambolena ao Ambohimalaza
Nisedra olana tanteraka ny kaominina Ambohimalaza nandritra ilay ora-nikija niseho afak�omaly alina teto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Tratry ny sangodim-panina tanteraka ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-mitranga ankehitriny.
Fitrandrahana mampidi-doza Ho Soamahamanina faha-2 Ampasindava
Mananontanona indray ny loza amin�ny resaka fitrandrahana harena ankibon�ny tany. Nilaza mantsy ny filoha Hery Rajaonarimampianina tany Antsiranana ny alarobia 26 aprily teo fa halamina ny taratasy momba ny fitrandrahana
Foire de l�immobilier Hanomboka rahampitso eny lapan�ny tan�na
Hotanterahina etsy amin�ny lapan�ny tan�nan�Analakely manomboka rahampitso sabotsy 29 aprily haharitra telo andro ilay � Foire de l�Immobilier � karakarain�ny In�Idea Agency,